Amụma nzuzo, OffshoreCompany.com
Nzuzo gị dị anyị mkpa. Anyị na-etinye ihe dị mkpa n'ichebe ozi nkeonwe gị.
Site na ịbanye ma ọ bụ na-eji saịtị weebụ OffshoreCompany.com, ị kwenyere na iwu nzuzo nzuzo OffshoreCompany.com dị ka akọwapụtara n'okpuru.
Ụbọchị Mgbanwe Mbụ: 20th May 2018
Nzuzo gị dị mkpa.
Ozi nkeonwe anyị na-anakọta, ọ bụrụ na ịnye ya, ga-eji kpọtụrụ gị, zitere gị ozi ndị ọzọ banyere ngwaahịa na ọrụ anyị, nye ọrụ mmemme ma nyekwuo ozi n'elu arịrịọ.
Mgbe ị na-enye anyị ozi gị maka nzube ndị a, ị kwenyere nchịkọta na nhazi anyị.
Anyị anaghị ekerịta ozi gị na ndị ọzọ
Site na ịga na weebụsaịtị anyị, nyefee ụdị ntanetị maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ịzụta ọrụ, site na ịnye ozi kọntaktị gị na email, ị kwenyere nchịkọta na nhazi nke ozi nkeonwe gị, PII, dị ka akọwapụtara ebe a.
Onye nchịkwa Data Data Protection Protection (GDPR) bụ General Corporate Services, Inc.
Ozi ị nwere ike inye n'okpuru GDPR
Ozi ị nwere ike ịnye bụ ịnye ọrụ, rịọ ozi ndị ọzọ ma nata mmelite iwu dị mkpa site na iji ejiji ederede na www.offshorecompany.com.com (ebe nrụọrụ weebụ), site na iziga anyị ozi, na-akpọ site na ekwentị, site n'iji post ozi ma ọ bụ na-akpọtụrụ anyị na nke ọzọ.
Ozi nke onwe onye ị na-enye bụ aha gị na ozi kọntaktị, akwụkwọ iwu akwadoro maka ọrụ nyere iwu, ozi ịkwụ ụgwọ maka iwu ọrụ, ozi mbupu maka nnyefe nnyefe na mpaghara niile achọrọ iji mezue ma dọọ akwụkwọ, dị ka; ozi ụlọ ọrụ ọhụrụ, ozi ntụkwasị obi ọhụrụ na akwụkwọ iwu metụtara ya.
Nchekwa Data gị
Anyị na-agba mbọ ka anyị kwekọọ na GDPR (edemede 5)
Data nkeonwe ga - abụ:
hazie n'ụzọ iwu kwadoro, n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ doro anya n'ihe metụtara isiokwu data ('iwu, ịdị mma na nghọta');
anakọtara maka nkenke a kapịrị ọnụ, ihe ndị doro anya na ihe ziri ezi ma gharazie ịhazi ya n'ụzọ na-ekwekọghị na nzube ndị ahụ; nhazi ọzọ maka ihe nchekwa edere na mmasị ọha mmadụ, ihe omumu sayensi ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ atụmatụ nchịkọta akụkọ, ga-adabere na Nkeji edemede 89 (1), a gaghị ewere ya na ekwekọghị na nzube mbụ ('njedebe nzube');
zuru ezu, dị mkpa na njedebe na ihe dị mkpa maka na ebumnuche nke ha na-edozi ('nchịkọta data');
ezi na, ma ọ dị mkpa, nọgidere na-aga n'ihu; a ghaghị ime mkpebi ọ bụla kwesịrị ekwesị iji jide n'aka na data nkeonwe ndị na-ezighị ezi, na-enwe ihe gbasara ebumnuche ha ji arụ ọrụ, ehichapụ ma ọ bụ dozie ya n'egbughị oge ('ziri ezi');
edebe ya n'ụdị nke na-ekwe ka njirimara nke isiokwu data gharakwa karịa ka ọ dị mkpa maka ebumnuche nke a na-ahazi data onwe onye; enwere ike ịchekwa data nkeonwe ya ruo oge dị ogologo karịa ka a ga-ahazi data nkeonwe maka naanị maka nchekwa ihe na ntụrụndụ ọha na eze, usoro sayensi ma ọ bụ akụkọ nyocha akụkọ ma ọ bụ atụmatụ nchịkọta akụkọ dịka Nkeji edemede 89 (1) n'okpuru ntinye iwu nke teknụzụ na nhazi usoro iwu a chọrọ iji chebe ikike na ohere nke isiokwu data ('njedebe nchekwa');
edozi ya n'ụzọ ga-eme ka nchedo nchedo nke data onwe onye, ​​gụnyere nchebe pụọ na nkwụnyeghị ikike ma ọ bụ iwu na-akwadoghị na ihe mberede, mbibi ma ọ bụ mmebi, site na iji usoro nhazi ma ọ bụ nkwekọrịta kwesịrị ekwesị ('iguzosi ike n'ezi ihe na nzuzo').
Anyị na-eji usoro ntanetịpụta ụlọ ọrụ ugbu a iji jikwaa ozi ahịa akwadoro na nchedo dijitalụ nke oge a ma nyefee njikwa usoro. Nzukọ anyị nwere "DPO" Data Protection Officer nke nwere ike iru site na iji kọntaktị page nke weebụsaịtị a.
Anyị na-eji ndị ọzọ na-akwado ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ ma nye nkwurịta okwu, mbupu, ịnye ọnụahịa / ịza ajụjụ na nhazi ego.
Anyị na-eji ụzọ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ, ọrụ kachasị mma na izo ya ezo ọ bụla o kwere mee mgbe ịnata, eziga na ịchekwa ozi gị.
Site na ịnye ozi nkeonwe, ị kwenyere na nke a.
Ozi anyị na-anakọta mgbe ịga na ebe nrụọrụ weebụ anyị:
adreesị IP gị, ihe nchọgharị, sistemụ arụmọrụ na ụdị kọmputa na ndọtị, plugins na ozi ngwaọrụ ndị ọzọ
otú ị si webataiti anyị, ụbọchị na oge ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị na gbasara ọdịnaya ị na-ele, na-ezo aka na saịtị na ọchụchọ engine.
Ịkekọrịta Data gị
Anyị ga-egosiputa ozi gị naanị na nkwenye gị ma ọ bụ iji rube isi n'iwu ma ọ bụ iwu ụlọikpe.
Ọ bụrụ na ị nyefee ụdị kọntaktị na ebe nrụọrụ weebụ anyị, a na-eziga ngalaba ndị ị nyefere n'okpuru ọrụ SalesForce na ụlọ ọrụ CRM na MailChimp ọrụ nlekọta akwụkwọ akụkọ. Ndị a bụ ndị GDPR na-akwado ndị nhazi data nke atọ.
Ọ bụrụ na ị na-ewelite email, kpọọ na ekwentị ma ọ bụ na-akpọtụrụ anyị, anyị nwere ike ịza site na email - GoDaddy na-enye anyị sava ma anyị jiri ngwanrọ email Microsoft Outlook. GoDaddy na Microsoft bụ GDPR na-akwado ndị nhazi data nke atọ.
Ihe nchịkọta data nke atọ ndị anyị na-eji bụ iwu GDPR
Google - Email na Onye na-enye nchịkọta weebụ
Microsoft - Onye na-enye Server Server
SalesForce - Onye ọrụ CRM
GoDaddy - Onye Ntanetị Web na Ngwaọrụ
GoogleDrive - Ngwọta Ihe Ntanetị / Nchekwa Ihe
Facebook - Onye na-enye aka na ahia
Akaụntụ ahịa - Ịkwụ Ụgwọ Nhazi
Anyị ga-ekwupụta ozi gị dịka iwu ahụ ma ọ bụ ịzụ ahịa ụlọọrụ.
Otu anyi si eji data gi
Ozi ị nyere ejiri iji mezuo ihe ọ bụla chọrọ iji nweta ozi ma ọ bụ ọrụ, mmelite dị mkpa maka iwu zuru ụwa ọnụ, nkwalite na ndụmọdụ.
Ozi anyị na-anakọta ejiri iji mụọ ọrụ anyị na ebe nrụọrụ weebụ ma melite ọdịnaya na njirimara onye ọrụ, nyochaa mmefu mgbasa ozi na mgbalị nakwa dị ka aro ndị akwadoro site mmasị.
Ozi nke atọ nwere ike jikọtara ya na ozi ị nyere ma ọ bụ anakọtara, iji mee ihe yana iwu nzuzo a.
Ikike gị n'okpuru GPDR
Right to Information - Ikike ịjụ ihe data onwe gị dị na otú e si eji ya eme ihe.
Ikike Nweta - Ikike ịlele data nkeonwe gị.
Ikike imeghari - Ikike imezi ma gbanwee ma ọ bụrụ na ọ bụghị emelite.
Ikike ịhapụ nkwenye - Ikike ịhapụ nkwenye na nchịkọta na nhazi nke ozi nkeonwe.
Ikike Ịgbochi - A ga-edozi ikike nke ịjụ data nke onwe gị.
Ikike ịjụ ịhazi nhazi ngwaọrụ - Ikike ịjụ mkpebi nke nhazi nhazi.
Kwesịrị ichefu echefu - Ikike ị rịọ ka e ehichapụ data gị.
Right maka data portability - Ikike ị rịọ ka e nyefee data gị - data ga-enye ma ọ bụ bufee ya na usoro ịntanetị nke a na-edozi.
Ogologo oge ole ka anyị na-edebe data gị?
Anyị ga-anọgide na-enwe ozi ndị ahịa ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa iji mezuo usoro ọrụ na ịkwado arịrịọ dịka ịkwado iwu chọrọ.
Kpọtụrụ anyị banyere iwepụ data gị.
Ụmụaka mara ọkwa n'okpuru 16 afọ
A chọrọ nkwenye nne na nna tupu ịnye anyị ozi gbasara gị.
Wepụ nkwenye gị
Kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị ma kwuo na nke a bụ arịrịọ ka ị wepụ nkwenye na nnakọta na nhazi nke ozi nkeonwe gị.
Arịrịọ Nweta Iwu (SAR)
N'ikwekọ na GDPR,
ị nwere ike ịrịọ ka anyị zitere gị ozi gbasara ozi ọ bụla anyị nwere, ma ọ bụ
ị nwere ike ịrịọ ka anyị dozie nsogbu ọ bụla, ma ọ bụ
ị nwere ike ịrịọ ka anyị wepụ data gị niile.
N'ikwekọ na GDPR, a na-enye niile nweta ohere maka n'efu n'ime  ụbọchị.
Maka ajụjụ ọ bụla metụtara data gị, ma ọ bụ ịnye arịrịọ, biko kpọtụrụ anyị:
Ekwentị: + 1 (800) 959-8819
Atụmatụ nke atọ
Anyị bụ naanị maka iwu nzuzo anyị.
Anyị nwere ike jikọta na weebụsaịtị ndị ọzọ. Ọ dị mkpa ịlele iwu nzuzo ha ma hụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na-akwado GDPR tupu izipu ozi nkeonwe.
Anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ maka njikwa nzuzo nke ndị ọzọ.
A na-eji klas gị eji kuki, ha bụ obere faịlụ na kọmputa gị nke na-eme ka ị mata na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Ụdị kuki anyị na-eji
Nchịkọta weebụ: nyere ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa, ịzụ ahịa okporo ụzọ na omume ọdịnaya iji melite ahịa na njirimara anyị.
Mgbasa ozi ezube: ihe ndekọ edere na weebụsaịtị anyị dịka ọdịnaya ị rịọrọ na njikọ ị pịa. Anyị na-eji nke a iji melite ihe onwunwe na ozi na weebụsaịtị na ngwa anyị.
Kuki ndị ọzọ nke nwere ike ịtọ na weebụsaịtị anyị gụnyere:
Nchịkọta Google na-anakọta data na-abụghị nke onwe gị maka ojiji weebụ dịka iwu nzuzo ha si dị: www.google.com/policies/privacy/
Ihe kuki nke Remarketing nke Google na-enye usoro ịzigharị ọdịnaya e nyere gị dabere na akụkọ ihe nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Ị nwere ike ịpụ na nke a na Google Ad Settings.
SalesForce bụ usoro CRM anyị na kuki na-enye anyị ohere ijikwa kọntaktị na ndị ahịa banyere nyocha ozi na iwu ọrụ.
Wordfence bụ WordPress Security Option nke na-eji kuki iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ mmadụ.
Facebook Pixel nyere nyocha usoro mgbasa ozi weebụsaịtị iji tụọ arụmọrụ mgbasa ozi.
Ị nwere ike igbochi kuki site na ịgbanwe agbanwe nke ihe nchọgharị gị.
OffshoreCompany.com bụ ụlọ ọrụ azụmahịa ma ọ bụghị ụlọ ọrụ iwu. Anyị anaghị enye ndụmọdụ gbasara iwu ma ọ bụ ndụmọdụ ego.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, nchegbu, ma ọ bụ nkwupụta gbasara atụmatụ ma ọ bụ omume nzuzo anyị, anyị ga-achọ ịma ihe ha bụ ka anyị nwee ike ịza ha. Biko kpọtụrụ anyị na 1-800-959-8819.